I-Emailvision nePinterest: Phina umncintiswano wakho webhokisi lokungenayo | Martech Zone
ULwesibili, April 24, 2012 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 4, 2017 Douglas Karr
Bengicabanga ukuthi lokhu kuwukusetshenziswa okuhle okuyingqayizivele kwePinterest ngakho-ke bengifuna ukuwabelana nabafundi bethu. Sonke siyakwazi lokho Pinterest ingenye yezihloko ezishisa kakhulu zosuku, futhi kusukela manje kuze kube nguMeyi 31, Ukubukwa nge-imeyili isiza abathengisi ukuthi basebenzise ibhodi lezindaba elibonakalayo ukuthola ukuqashelwa okwengeziwe - nemiphumela - yemikhankaso yabo yokuthengisa ye-imeyili yokudala.
Abamakethi bayamenywa ukuba baphine i-imeyili yabo kubuciko Phina ibhokisi lakho lokungenayo. Lapha, umphakathi wasePinterest (nabanye abathengisi) ungabuka futhi "uthande" imikhankaso yabo. Vele, umfanekiso ophiniwe uzoqondisa kabusha kunguqulo yoqobo eku-inthanethi, ezobasiza bathole ukuchofoza okwengeziwe futhi kuvuleke. I-imeyili enokuningi ukuthandwa izotholela umdali wayo ithuba lokuthola umsebenzi wamahhala wokuqamba kusuka kusitudiyo sokwakha se-Emailvision.
Tags: Ibhokisi lokungenayoukwakheka kweposiPinterest